May Nyane: ဒေါသသင့်နေမယ့် စာ
ဟုတ်တယ် အမရေ သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲ ကျနော် အလေးစားဆုံးကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘဲ
သိပ်ကို ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့.. မြန်မာလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မခေါ်သင့်တော့တဲ့ လူတွေပါ..။ အဲလို လူတွေအကြောင်း မြင်ရ ကြားရတာ ကျနော်လဲ အရမ်းဒေါသထွက်မိတယ်..။ တချိန်ထဲမှာပဲ အဲလို လူတွေက အများစု ဖြစ်ဖြစ်နေတာ မြင်ရပြန်တော့......
အင်း.. "အောင်နက်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ.. ဂုတ်ကျားမျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ.." လို့ ပဲ ရွဲ့ပြီး ကြွေးကြော်လိုက်ချင်တော့တာပဲ ဆရာမရယ်.... :(
ဆရာမနဲ့ အန်တီနဲ့ ရာသီခွင်တခုထဲ မွေးကြတာလား။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဘ၀တွေကို ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်တာလည်း တူနေတယ်နော်။ ဆရာမ ချစ်တဲ့ မေမေနဲ့ မဝေးလှတဲ့ ကာလတခုမှာ ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေ။
စိတ်မကောင်းလဲ ဖြစ် ဒေါသလဲထွက် ..။
ကောင်းလိုက်တာ ဆရာမရာ။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သဘောတူတယ်။
ဘဘဦးဝင်းတင်လည်း ဒီလောက်ပြောနေတာပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းထဲက ထွက်လာတဲ့ အကြံဉာဏ်ဆိုရင် ထပ်ပြင်စရာမလိုလောက်အောင် ကောင်းပြီးသား။ နောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရော ဗမာတွေရော ပြည်ထောင်စုတခုလုံးက ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကို ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် တဦးတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘယ်သူ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကို ခံရလို့လဲ။ သူတို့အနေနဲ့ အပြင်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားခွင့်ရနေတာတောင် နိုင်ငံရေးကို ရွေ့လျားအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့ အကျယ်ချုပ်နဲ့နေနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တဖက်သတ် အပုပ်ချချင်သေးတယ်။ အဲသည်လူတွေကို ချဉ်သဗျာ။
တခြားဟာမယှဉ်ပါနဲ့ ဆရာမရယ်... ရုပ်ကိုပဲယှဉ်ပါဦး။ ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး ကျက်သရေရှိလိုက်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ အရည်အချင်းဆိုလည်း ကမ္ဘာကျော် သမ္မတတွေကတောင် လေးစားရလောက်တယ်။
ဆရာမပြောသလို အောင်ဆန်းဦးကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သားကြီးလို့တောင် အသိအမှတ်မပြုဘူး...
ထွက်သင့်တဲ့ ဒေါသ နဲ့ ရေးသင့်တဲ့ စာ ပါပဲ။
ပြည်သူ့အတွက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ရှားပါးလွန်းလို့ ဒေါ်စုကို ပြည်သူတရပ်လုံး တန်ဖိုးထား လေးစား ထောက်ခံနေရတာပေါ့။
ဆရာမရေးတဲ့ နောက်ဆုံးအပုဒ်ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
ဒေါ်စု ခင်ပွန်းဆုံးတော့ ရေးတဲ့စာလေးကို ဖတ်ပြီး တကယ်ပဲ မျက်ရည်ဝဲ မိပါတယ်။ သူ့လို ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိသားစုကို ပစ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်နေသူမို့ အသက်ရှည်ကျန်းမာပါစေလို့ နေ့တိုင်း ဆုတောင်းမိပါတယ်။
အစ်မရေ..အခုတလော စာတွေရေးရင် ဒေါသတွေပဲ ပါနေလို့ ပို့စ်တွေတောင် မတင်နိုင်ဘူး..အစ်မ စာတွေ ဖတ်လိုက်ရတာ ကိုယ်မျိုသိပ်ထားရတဲ့ မထွက်ရတဲ့ ဒေါသတွေ ထွက်လိုက်ရသလိုပဲ..စိတ်ထဲ တော်တော်ပေါ့ပါးသွားပါတယ်။ :)
အန်တီစုဆိုတာ အချိန်တွေ ကြာလေ ကြာလေ သူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေက ပိုတောက်ပြောင်လာလေပါပဲ... ကျမအတွက်တော့ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ ကြက်သီးထ စေတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးပါ..။ အဖေက အသက်ကို စတေးပြီး တိုင်းပြည်ကို လွတ်လပ်ရေး အရယူပေးခဲ့တယ်။ သမီးက တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးရင်းပြီး မတရားမှုကို ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုက်ယူနေတဲ့ အချိန်မှာ...။
မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ အစ်မရယ်.. ခြလှိုက်စားနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်အို အိမ်ပျက်ကြီးလိုပါပဲ... :(
ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ မှာ ကျရောက်မယ့် မ ရဲ့ မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ရာကျော်တိုင် ချစ်တဲ့မိသားစုလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ … ကလောင်သွားတွေ ဒီထက်မက ပိုထက်ပြီး စာပေမှတ်တိုင်တွေ အများကြီးစိုက်ထူနိုင်ပါစေလို့ …
မ ရေ… ကျွန်မ ဟိုးတုန်းကတည်းက ဒီနေ့ ထိ ဖတ်နေတဲ့ မဂ္ဂဇင်းက ရွှေအမြုတေပါ… မဂ္ဂဇင်းတအုပ်လုံးမှာ အဲဒီတပုဒ်က လွဲလို့အမြဲတရွက် မကျန်ကုန်အောင် ဖတ်ပါတယ်… လတိုင်း အဲဒီတပုဒ်တော့ စာမျက်နှာတွေကို တမင်ကျော်သွားတာ… မကြည့်ချင်လောက်အောင်ကို စိတ်ပျက်အော်ဂလီဆန်လွန်းလို့ လေ…
I agreed & supported your article 100%. All are true. Very sad for our country and people there.
အသံသစ်ပြတိုက် ထက် ၁၀၀% ပိုကောင်းတဲ့ သမိုင်းတွင်မယ့် ရာဇဝင်တစ်ခုကို ဆရာမရေးလိမ့်လို့မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။
သူတို့လည်း ခေတ်စနစ်က ပုံသွင်းခံခဲ့ရသူတွေ ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထားကောင်းမရှိတော့ ပိုဆိုးကုန်တာပေါ့။
အရည်အချင်းတွေနဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပုံကတော့ မတူပါဘူး ညီမရယ်..။ ဆုတောင်းပေးတာ ပြည့်ပါရစေ..။
ကျမ အဲလို စိတ်မကောင်း ဒေါသဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာလှပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ မိုးကြီးချုပ် ဆိုသလို..။ အန်တီစုကိုပဲ သနားမိတယ်။
သမိုင်းကတော့ မသေပါဘူး။ ကျမကတော့ အဲဒီလူတွေ အကုန် မှတ်ထားတယ်။ စောင့်ကြည့်ပါဦးမယ်.. လူထုအတွက် သူတို့ ဘာတွေ ဘလောက်လုပ်သလဲဆိုတာ..။ ဒါမှမဟုတ် လူထုကို ပြပြီး ဘလောက်လုပ်သလဲဆိုတာပေါ့..။
အမကတော့ သူတို့အစား ရှက်တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အောင်ဆန်းဦးဆိုတဲ့ နာမည်ရဲ့ နောက်ခံသမိုင်းအတွက်.. မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အတွက် ဗိုလ်မင်းရောင်က စလို့ ခု အန်တီစုအထိ.. အားနာလိုက်တာ။
ဒါပေါ့ ချိုသင်းရယ်..။ ခုချိန်မှာ အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ.. သူများမပြောနဲ့။ သူတို့ ဘိုးအေ နအဖကကို အန်တီ့တန်ဖိုးကို သိလို့ အမျိုးမျိုးအကြောင်းရှာပြီး ချုပ်နေတာမဟုတ်လား။
ဆုတောင်းတာပဲ တတ်နိုင်တဲ့အတွက်လည်း စိတ်ထိခိုက်ပါတယ် ချိုသင်းရယ်..။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် စိတ်မောလှပါတယ်။ သူတို့ ကြာနေလေလေ.. ကိုယ့်တိုင်းပြည် ဆုတ်ယုတ် နစ်နာသက် ကြာလေလေ.. မျိုးဆက်တွေ တဆက်ပြီးတဆက် နစ်မွန်းလေ..။ စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းလှပါတယ်။
မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆုတောင်းနဲ့ ပြည့်ပါစေသား..။
ရွှေအမြုတေကိစ္စမှာလည်း သဘောထားတူပြန်ပီ။ အမတော့ အဲဒီစာမျက်နှာတွေအတွက် ဦးဝင်းငြိမ်းကိုတောင် စိတ်ခုမိပါရဲ့..။ မုန်းလွန်းလို့။
အသံသစ်ပြတိုက်က ဆူလွယ်နပ်လွယ် စာအုပ်တအုပ်ပါ။ အမကိုယ်တိုင် စိတ်အပျက်ဆုံး စာအုပ်ပေါ့..။ ဒါောကာင့် အဲဒီစာအုပ်ထက်တော့ သာအောင်ရေးမှာ အသေအချာ...။
ဟုတ်ပါ့ .. လူတိုင်းကို သူ့လို မနာလို မရှုဆိတ်ကြီးတယ်မှတ်ပြီး ရေးထားတဲ့ စာလေ.. ဟီဟိ။ သူ့ခမျာတော့ အန်တီစု အောင်မြင်မှုတွေကို မုဒိတာတရားမပွားနိုင်ရှာသူဆိုတော့..။ အံ့ပါ့။ တူသလား တန်သလားကွယ်.. သူ့ သမိုင်းကြောင်း သူ့ တန်ဖိုး သူလာရာလမ်းကြောင်းနဲ့.. ပြောချင်ဘူး..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခြေဖျားတောင်မမှီင်္ပဲ သူ့ကို ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ပစ်တင်သူများ ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စွာ လူထုကို နှိပ်စက်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲတွန်းချနေသူများ ၊ လူဟုပင် မခေါ်ထိုက်သူများအားလုံးကို သူတို့နဲ့ တန်တဲ့ အကျိုး မနှေးအမြန်ခံစားကြရပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းသာ.....